WOWW! အရမ်း ကို ဆွဲဆောင်မှု ရှိ သော မျက်ဝန်း ရဲ့ အလှပုံရိပ် များ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / WOWW! အရမ်း ကို ဆွဲဆောင်မှု ရှိ သော မျက်ဝန်း ရဲ့ အလှပုံရိပ် များ
မြင်သူ တိုင်းငေး လောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက် ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင် ထား တဲ့ မော်ဒယ်လ် မျက်ဝန်း ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြား ရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှုရရှိထားတဲ့သူမကတော့ social media လောက မှာ နာမည် တစ်လုံး နဲ့ ရပ်တည်နေသူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက်စား ပုံတွေနဲ့ ညို့ အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေးဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာမှာ ရေပန်းစား လူကြိုက်များကာ ပုရိသ တွေ ဝန်းရံနေကြတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေ ကို လူမှုကွန် ယက်ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိ တာတွေ့ ရပါတယ်။ ပုံလေးတွေတိုင်း မှာ မော်ဒယ်မျက်ဝန်း တစ်ယောက် ဆွဲ ဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်းနေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်၊၊ ‌မော်ဒယ် မျက်ဝန်းရဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်တယ်နော်။
photo credit myat won
Previous post အမိုက်စား ဖက်ရှင် လေး နဲ့ အထှာ ကျကျ ဓာတ်ဖမ်း နေ တဲ့ ရွှေအိမ်စည်
Next post ဆွဲဆောင်မှု ရှိစွာ စက်ဘီး ကို ကျွမ်းကျွမ်း ကျင်ကျင်စီး ပြ လိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် …